သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး | အမျိုးသားလွှတ်တော်
04/25/2017 - 00:27
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်သံအမတ်ကြီး H.E. DR. LUAN THUY DUONG အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong အား (၂၅-၄-၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၀၀၀) နာရီတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
04/24/2017 - 00:26
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အထက်လွှတ်တော် REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL မှ အဖွဲ့အစည်းများ အရည်အချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ (INSTITUTIONAL CAPACITY DEVELOPMENT COMMITTEE) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ PROF. DR. JOHN PIERIS ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အထက်လွှတ်တော် Regional Representative Council မှ အဖွဲ့အစည်းများ အရည်အချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ (Institutional Capacity Development Committee) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ Prof. Dr. John Pieris ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား (၂၄.၄.၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၀၀၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော်ချင်း အပြန်အလှန်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ရေး၊ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်၏ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
04/06/2017 - 00:26
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း UNICEF ၏ DEPUTY EXECUTIVE DIRECTOR MR. ROBERT JUSTIN ALEXANDER FORSYTH အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် UNICEF ၏ Deputy Executive Director Mr. Robert Justin Alexander Forsyth အား (၆-၄-၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၃၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ ဆုံခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
04/06/2017 - 00:25
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့အခြေစိုက် GLOBAL COMMISSION ON DRUG POLICY (GCDP) ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း MS. RUTH DREIFUSS အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့ အခြေစိုက် Global Commission on Drug Policy (GCDP) ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း Ms. Ruth Dreifuss အား ၆-၄-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၁၀၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါ သည်။
04/05/2017 - 00:24
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. MR. JAROSLAV DOLECEK အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jaroslav Dolecek အား (၅-၄-၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၀၀၀) နာရီ တွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ သည်။
03/17/2017 - 14:28
အမျိုးသားလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ
အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်သူတို့၏တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ
03/17/2017 - 14:27
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးကာလအတွင်း သတ္တုသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး၏ အငယ်တန်းစာရေးရာထူးဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်